पारिवारिक जीवनको खुशीको लागि ४ सुझाव - नेपालबहस
पारिवारिक जीवनको खुशीको लागि ४ सुझाव
| २०:००:३९ मा प्रकाशित
यो समय कोरोना महामारीको छ । सरकारले जोखिम नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेकाे छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धेरै जसाे तपाई हामी घरमै छाैँ । यदि हामी आफ्नो परिवारलाई समय दिन पाएका छैनाैँ भने, यो समय राम्राे अवसर पनि हुनसक्छ । अर्को कुरा परिवारसँग धेरै जसो सँगै भएर पनि पारिवारिक खुशी भएको छैन भने त्यसले खुशी भन्दा झमेला निम्त्याउन सक्छ । तर कसरी सञ्चार गर्ने त परिवारमा खुशीको ?
आफ्नो परिवारलाई हरेक झण्झटबाट बचाउनु परिवारको मुलीको उत्तरदायित्व हो । व्यस्तताका कारण तपाईलाई आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन पर्याप्त समय नपुगेको हुन सक्छ । तर तपाईले यो याद राख्नुपर्छ कि तपाईको परिवार तपाईको जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशहरू हुन् । त्यसकारण तपाईंको कामको साथमा तपाईंको परिवारलाई सुखी राख्नु पनि तपाईको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यहाँ पारिवारिक जीवनको खुशीको लागि केही सुझावहरू छन् ।
काम र परिवारको बीचमा सद्भाव सिर्जना गर्ने
यदि तपाई सुखी पारिवारिक जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनको बीचमा तालमेल सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यद्यपि यो अलि गाह्रो कुरा पनि हो तर असम्भव छैन। तपाई आफ्नो कामलाई यस्तो तरिकाले प्रबन्ध गर्न प्रयास गर्नुहोस् ।
राम्रो सामानको कदर गर्ने
जब तपाई परिवारका एक सदस्य वा बच्चाले केही राम्रो गरेको महसुस गर्नुहुन्छ, तब तपाईं तिनीहरूको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याइँ नगर्नुहोस् । यो किनभने तिनीहरू त्यसो गरेर खुशी हुन सक्छन् । यसले तपाईंको परिवारमा घनिष्ठता बढाउनेछ र यसले नकरात्मक भावलाई पनि हटाउने छ।
सँगै बसेर खाना खाने
परिवारको अर्थ साथ हो । जसले खुसी र दुः खमा साथ दिने गर्छन् । सँगै बसेर खाना खाँदा पनि तपाईको सम्बन्ध बलियो हुन्छ र परिवारमा प्रेम बढ्छ । यदि कुनैदिन तपाईं छुट्टिमा हुनुहुन्छ भने कतैको यात्रासँगै नविन किसिमको खानेकुरा पनि खान सक्नुहुन्छ । तर प्रायः जसो तपाईं परिवारको साथमा सँगै खाना खाने कोसिस गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक सप्ताहन्त घरको काममा भन्दा परिवारको लागि खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तपाईको बच्चाहरू सँग एक सप्ताहान्त यात्राको योजना बनाउनुहोस् । जसमा तपाईले घुम्न जाने योजना बनाउनु पर्छ । चलचित्र हेर्न जान सक्नुहुन्छ, पिकनिक जान सक्नुहुन्छ वा केही अन्य योजनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसो त आवश्यक छैन कि तपाई परिवारको खुसीको लागि ठूलो वा महँगो खर्च गर्नुहोस् । समय समयमा तपाई घरमा एउटा सानो भोजको आयोजना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईको खुशी बढाउनेछ ।
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा काका पक्राउ १५ घण्टा पहिले
फेरि अर्को लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्दै २० घण्टा पहिले
टिकटकद्वारा अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरुका लागि गोपनीयता नीति परिवर्तन ३ दिन पहिले
बारपाकमा अक्सिजन मिनिप्लान्ट जडान ७ दिन पहिले
प्रहरी कार्यालयमा महिलामाथि कुटपिट गरेकाे अभियोगमा ज्वाला संग्रौलासहित ३ जना पक्राउ ४ दिन पहिले
के तपाई तनाव कम गर्न चाहानु हुन्छ ? ४ हप्ता पहिले
महतोको नागरिकता छानबिन गर्न अख्तियारमा उजुरी २ दिन पहिले
व्यवसायिक कागती खेतीमा किसान ३ हप्ता पहिले
सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा रु ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट पेश [ पूर्णपाठ ] १ हप्ता पहिले
मुख्यमन्त्री पोखरेल चढेको हेलिकोप्टर फेरि चामेमै फर्कियाे ! ७ दिन पहिले
‘चिनियाँ रेल काठमाडौं आउने आधार तय’ २ वर्ष पहिले
सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत ५ महिना पहिले
यूएमको क्रुजर बाइकले ल्यायो नयाँ वर्षको बहार, एक लाखसम्म नगद उपहार २ वर्ष पहिले